Ny hetsika F5 dia fanomezam-boninahitra an`Andriamanitra. Mizara dimy ny fotokevi-dehibe. Ny F voalohany (F1) dia ny fitoriana ny filazantsara. Ny F2 dia ny fitoriana ny filazantsara an-kira. Ny F3 dia ny fitsaboana sy fahasalamana. Ny F4 dia ny fanatanjahantena. Ny F5 farany dia ny fiarahana misakafo sy fiarahana mifaly. Araka ny nambaran`ny Pastera Radimison Jonah, sekretera jeneralin`ny FJKM, ny fitoriana ny filazantsara no tena ivon’ity hetsika ity. Fikarakarana ny ara-nofo amin`ny alalan`ny fahasalamana maro samihafa sy ny fanatanjahantena, hoy ihany izy. Amin`ny maha hetsika F5 azy ity dia nisy tranoheva nizaham-pahasalamana maimaimpoana. Nisy ihany koa ny hetsika ara-panatanjahantena toy ny baolina kitra sy ny fampisehoana sora-dihy sy ny fitoriana filazantsara an-kira.